Malfeitona: Farshaxanka Tattoo-ka ee caanka ku noqday naqshadaheeda | Tattoo
Xaaladda layaabka leh ee farshaxanka tattoo Malfeitona: waxay caan ku noqotay naqshadaheeda foosha xun
Antonio FDez | | Fanaaniinta Tattoo
Akhrinta cinwaanka kadib, astaamaha "foolxun" ayaa kuguula muuqan kara xad dhaaf. Laakiin runtu waxay tahay haddii aan u baahdo inaan raadsado erey kale si aan u qeexo qaabka tattoos-ka ay sameeyeen Tattoo artist Malfeitona waxay noqon lahayd "xad-dhaaf." Farshaxaniistaha caanka ah ee loo yaqaan 'tattoo artist' ayaa caan ka noqday caalamka maalmihii la soo dhaafay ka dib markii naqshadaha qaar ee ay sameyso ay ku faafo shabakadda.
Malfeitone, dhab ahaan loo yaqaan Helen Fernandes, waa a Farshaxaniiste u dhashay Brazil oo qaabkeedu caan ka noqday adduunka oo dhan. Injineer makaanik ah oo ay tababartay, ayay hadda tahay dabeecad loo hanqal taago baraha bulshada shaqadeeda caan sida Tattoo artist. In kasta oo sawirku uusan ka mid ahayn hibadaheeda ugu weyn, haddana Fernandes waxay go’aansatay inay tatuujiso qaabkeeda u gaarka ah, taasoo horseedday aqoonsi caalami ah waqti aan dheerayn.
Mid ka mid ah naqshadaha jilicsan ee Malfeitona.
Sannad ka hor Malfeitone Waxay ahayd shaqo la'aan sidaa darteed waxay go'aansatay inay hesho wax ay shaqaalaysiiso oo ay lacag ka hesho. Intii lagu guda jiray xilligii firaaqada, Helen waxay bilowday inay sawirto maqaarka saaxiibkeed oo ay aragto natiijada, waxay go'aansatay inay la sii wado laylinta asxaabteeda. Sababtoo ah dhammaan walxaha lagama maarmaanka u ah sameynta tattoosku way sarreeyaan, ugu dhakhsaha badan wuxuu bilaabay inuu lacag ka qaado naqshadiisa.
Waa macquul taasi Farshaxanno fara badan oo tattoo ah iyo taageerayaasha tattoo, naqshadaha Malfeitona waxaa kaliya lagu tilmaami karaa inay yihiin kuwo fool xun ama xad-dhaaf ah.. Si kastaba ha noqotee, tirada dadka horay u soo maray gacmahooda waa mid xusid mudan. Runtu waxay tahay, in kasta oo ay yihiin kuwo aan caadi ahayn, haddana astaantoodu waxay leedahay dhinac aad u faraxsan oo baashaal ah. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato shaqadooda, waxaan kugula talinayaa taas raac instagram ilaa Malfeitona.
Xigasho - Instagram
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Fanaaniinta Tattoo » Xaaladda layaabka leh ee farshaxanka tattoo Malfeitona: waxay caan ku noqotay naqshadaheeda foosha xun
Brooklyn Beckham wuxuu istaagey istuudiyaha Dhakhtarka Woo
BAUM FEST 2017: shirkii caalamiga ahaa ee tatuuga ee Barcelona ayaa 20 jirsaday